Kudzokera kune kwakatangira kururamisiro nehunhu: Maât - Afrikhepri Fondation
La maâ.t inobva muchiito Maa (MEI muCoptic uye MEI kana MEYI mune mamwe maBantu, kunyange Ma akagara). Izwi guru rinoreva chiito maâ " kuva wechokwadi". Kune hukuru hwe " chokwadi (Maat) pane mamwe manzwi. Asi zvinorevei? kuva wechokwadi"," kuva wechokwadi"," chii chaizvoizvo, chaizvoizvo » (wnnw maâ) ndima kushorwa kune chii venhema", pa" chii chinyorwa".
Mupfungwa yake yekutanga, kukurudzira Maat ibasa Unu-Maa, kureva, "ichokwadi".
Kusimudzira chiri chechokwadi kusimudzira Ruzivo, Sayenzi; ndeyekubatsira kudzorera Nhoroondo yeChokwadi (Nhoroondo) uye Natural Chokwadi (zvakasikwa sainzi)
VaIjipiti vekare, Maat hunomiririrwa mwarikadzi akapfeka ane Mhou munhenga, chiratidzo chokwadi, chiedza, pose Maererano ari panyama uye tsika, mamiriro kuti zvive zvakanaka.
Imi muri kururama uku (feather), iyo yakaonekwa muZimbabwe Land Oh! rufu; kuti Osiris akauyiswa kunaHorusi, waakaisa paari, nokuda kweuchapupu hwezwi rakarurama, uyo aingova neanzwi pamusoro pevavengi vake ...
Ndicho chiedza chinovhenekera nyika nekufema kwayo kwekururamisa uye hupenyu, iyo inopesana nemafungiro ayo maitiro ose okusaruramisira, maitiro ose emupombwe, kusagadzikana kwose. Ndiyo zvokudya zvekutanga zvehupenyu hwose uye hweMwari wose, ndiwo mubairo wevakarurama pamberi pe Divine Court of Osiris. Maat inouya kubva muchiito cheMaa, Mei kubva kuCoptic naMei kubva mune dzimwe maBantu. Kutsigira Maat ndiko kukurudzira icho chiri chechokwadi, kugadzirisa zvakare nhoroondo, chokwadi chezvokwadi ndekukurudzira sayenzi, ruzivo.
Ma'at zvinoreva mukati mawo maitiro chete, chokwadi, zvakanaka, kuremekedzwa uye kuenzana. Izvo zvakasiyana nezvakaipa, mhirizhonga, nhema uye zvose zvisiri izvo, zvinoita kune uyo anoita zvoukama, zvinopesana nehupenyu hwekunyengera uye makaro, inokurudzira kururamisira kune munhu nokuti inotsanangura semutemo pakati pake (munhu) uye muumbi. Chinangwa chevanhu pasi pano ndechekuchengetedza (pakati pemurume nemukadzi uye zvakanaka nezvakaipa) zvezvisikwa kuburikidza nemutemo waMwari. Kana izvi zvichinyatsoperera, tinoona kusanganisa kwevanhu pamwe nematambudziko anotyisa kwezvisikwa; iyo inogona kutsanangurwa nekuderera kwemitemo uye Mwari. Kudzidzisa Ma'at ndiko kuita zvakanaka kune zvakanaka zvevanhu.
Isu tinowana mazuva ano muAfrica zvirevo padhuze nemisimboti yeMaat senge "Ubuntu" yakashandiswa mukuyanana kwevatema nevachena kubvira kupera kwehutongerwe enyika Vachena) muSouth Africa.
Maat anotungamirira upenyu hwedu panyika kuti kubvumira isu kuti kwokupedzisira adzokera Mwari (Ra), uye nokuda kuti iye rakapepetwa ari 42 mirairo kwakavakirwa: kuremekedza kuzvida, chete vachifunga kuti kunoita kuti shoko uye runyararo runyararo.
KUTYA KWESE MAS
2 nyowani kubva ku € 22,00
1 yakashandiswa kubva ku31,56 €
Tenga € 22,00
Déese Maat, mini, yekare Egypt
4 nyowani kubva ku € 18,30
4 yakashandiswa kubva ku32,29 €
Tenga € 18,30
Nhanganyaya kuMaat Philosophy
2 nyowani kubva ku € 19,44
2 yakashandiswa kubva ku14,22 €
Tenga € 19,44
2 nyowani kubva ku € 27,95
1 yakashandiswa kubva ku22,00 €
Tenga € 27,95
Yakapedzisira kugadziridzwa muna Ndira 21, 2021 8:40 PM
chikamu UZIMWE NEZVAKRISTU
United States, democracy, inoshandisa mutongo werufu
Simba reiyo Present Moment - Eckhart Tolle (PDF)
Tenzi kumadzibaba edu